सागकाे बजेट निर्धारण समितिले तीन साता वित्दा पनि काम पुरा गरेन ! | | Neplays.com
सागकाे बजेट निर्धारण समितिले तीन साता वित्दा पनि काम पुरा गरेन !
By Neplays	 Last updated May 28, 2019
नेप्लेज, १३ जेठ । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागका लागि कति बजेट चाहिने कस्ताे शीर्षकमा कति बजेट भनेर विस्तृत खर्च विवरण निर्धारण गर्न सकेकाे छैन् । करिव तीन साता अगाडि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेपका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाकाे संयाेजकत्वमा बजेट निर्धारण गर्न कार्यदल बनाएकाे थियाे । एक सातामा बजेट निर्धारणका लागि समय दिए पनि तीन साता लाग्दासम्म कार्यदलले कुनै प्रगति गर्न सकेकाे छैन ।
बजेट निर्धारणकाे जिम्मेवारी पाएका उपाध्यक्ष तिम्सिनाले साे बेला बुधबार बैठक बाेलाएका थिए । तर बैठकले कुनै ठाेस निर्णय लिन सकेन । सागका लागि राखेकाे बाेर्ड बैठकले ४ अर्वकाे बजेट अनुमान गरेकाे थियाे । तर यसकाे विस्तृत विवरणका लागि कार्यदल बनाएकाे थियाे । तर कार्यदलका संयाेजक नै यतिबेला काेरियामा छन् ।
यता राखेपले बजेटका बारेमा कुनै ठाेस जानकारी नआएकाे बताएकाे छ । मन्त्रालयले सागका लागि विभिन्न कार्यदल बनाएकाे छ । जसमा सबै क्षेत्रका ब्यक्तित्व राखिएकाे छ । जसमा सुरक्षा समितिमा नेपाल प्रहारीका महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल, आवासमा तेज गुरुङ, स्वयमसेवकमा बिनोद श्रेष्ठ, यातायातमा शिव कोइराला र खेल स्थल व्यवस्थापनमा टासी घलेलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
यता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले जिम्मा पाएकाे राष्ट्रिय टिम तयारीका काम बुधबारबाट सुरू गर्दैछ । तर राखेपले पनि ताेकेकाे मिति भन्दा एक साता पछि मात्र तयारी सुरू गराउन लागेकाे हाे । सुरूवातमा जेठका पहिलाे सातामा नै तयारी सुरू गर्ने बताएकाे थियाे । तर प्राविधिक कारणले एक साता ढिलाे भएकाे राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले बताए ।
जसमा पहिलाे चरणमा सात खेललाई प्रशिक्षणमा राखिनेछ । टेबल टेनिस, प्याराग्लाईडिङ, सुटिङ, जुडो, भारत्तोलन, आर्चरी, र स्क्वासका खेलाडीले बुधबारबाट तयारी गर्नेछन् ।
यसका लागि राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण र रजत जितेका खेलाडीलाई बाेलाएकाे छ । आगामी डिसेम्बरमा नेपालमा आयोजना हुने तय भएको सागमा २७ खेल समावेश छन् ।